Maqaal: Madaxweyne Sheekh Shariif Sh. Axmed: Gaarnimo Soomaaliyeed
W/Q S. Shire
Guuldarrada hanashada hoggaan u heellan mudnaanta danta waxay soo afjarantay markii uu saaxadda ku soo biiray Madaxweyne Sheekh Shariif Sheekh Axmed, goor ku beegan faafiddii ururkii Maxkamadaha ee sannadkii 2006-dii. Ka gadaal dagaalladii sokeeye ee dalka ka qarxay horraantii sagaashameeyadii ee lagu afgembiyey taliskii militariyeed ee Xisbigii Hantiwadaagga Kacaanka Soomaaliyeed ee marxuun Maxamed Siyaad Barre ee dalka hoggaaminayey toddobaatameeyadii iyo siddeetameeyadii, ma jirin cid si buuxda u hanatay kalsoonida dadweynaha sida uu Mx. Sheekh Shariif u hantay. Ma jirin siyaasi aan cagahiisa dhiig ka dhibcayn oo nabad iyo kalsooni dadweyne ku yimid Villa Soomaaliya. Dadweynuhu na ma hanan siyaasi sidiisa oo kale u soo halgamay danahooda guud. Siyaasadda Madaxweyne Shariif waxay ku salaysan tahay; ka barbaaridda siyaasadda qabaliga ah ee inta badan madaxdii Soomaaliya soo martay hankoodii ugu dambayn hal bacaad lagu lisay ka dhigay
ka caagganaan danaha gaar ahaaneed
siyaasad gundhiggeedu yahay; dulqaad, wadahadal iyo qunyar socosho (taas oo ay isku waayeen saaxiibbadiisii hore, sida Daahir Aweys, iyo qaar kale)
siyaasad ku salaysan wixii suurogal ah Madaxtinnimadu waa wax ku yeelashada baalalka taariikheed iyo waxa ku kaydnaan doona qaayahooda. Waa waxa ay taariikhdu kaa tiraahdo iyo sida laguu tebo marka talisku dhammaado, waxay ahaataa mid ku qotonta maahmaahda ah; nin maqan tebistii waa nin jooga ceebtiis. Gaarnimada siyaasadda Madaxweyne Sheekh Shariif Sheekh Axmed ee u tabaabushaysan danta guud mudnaanteeda, dulqaadka, qunyar socodka iyo u dhiirrinaanta wixii suurogal ah ayaanan beryahaan dambe lagu arag carriga Soomaaliyeed. Mx. Sheekh Shariif wuxuu Villa Soomaaliya dhex fadhiyey ayada oo xabbaddu daaqadda ka soo dusaysay
Danta Guud dantaguud@hotmail.com